IZIQITHI EZINGAMA-37 EZIHLE ZEKHITSHI EZINEEBHARI ZESIDLO SAKUSASA (IMIFANEKISO) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Iziqithi ezingama-37 ezihle zeKhitshi ezineeBhari zesidlo sakusasa (Imifanekiso)
Iziqithi ezingama-37 ezihle zeKhitshi ezineeBhari zesidlo sakusasa (Imifanekiso)
Eli ligalari yethu yeziqithi zasekhitshini ezintle ezinemivalo yesidlo sakusasa. Ibha yesidlo sakusasa ekhitshini inokuba yindlela elungileyo yokuzisa abahlobo kunye nosapho kunye kwaye kulungile ukutya ukutya okukhawulezayo okanye ukonwabisa. Ibha yesidlo sakusasa yasekhitshini ine-12 ukuya kwi-16 ye-intshi ekhawuntarini yokubonelela ngendawo yemilenze ngelixa ikwabonelela ngendawo eninzi yokuseta itafile kunye nokutya. Indawo yokutya kwasekuseni inokuphakanyiswa okanye ihlale kubude obufanayo besiqithi sekhitshi. Apha ngezantsi uyakufumana iindlela ezahlukeneyo zebar yesidlo sakusasa ukukunceda ufumane izimvo kwaye ufumane eyona ikulungeleyo.
Kumfanekiso ongentla kwekhitshi elinobunkunkqele elibonisa ubuhle beekristale ezijingayo ezivumela esi siqithi sakusasa ukuba siqaqambe kwaye sitsala umdla. Ukongeza isinki kwesi siqithi kunika indawo eninzi yokulungiselela ukutya. Esi siqithi sefenitshala sitayile siyilelwe ngokwenziwa kwayo; kunye nokusebenza ngokuyila indawo yokugcina. Ithayile emhlophe yangaphantsi yendlela yokubuyela umva kunye nomhlophe weklasikhi wekhabhathi yangaphakathi yeekhabhathi zekhawuntari emnyama kunye nezixhobo zentsimbi ezingenasici zinika eli khitshi ubuhle obongezelelekileyo.
Ikhitshi alisiyondawo yokulungiselela ukutya kuphela kodwa likwayindawo apho usapho luhlanganisana khona nokuba lunandiphe isidlo esikhawulezileyo okanye ukuba nincokole nje. Kule mihla, ukonwabisa iindwendwe zihlala kubandakanya abantu abahlanganisana ngaphakathi ekhitshini. Iinjongo ezininzi ezibonelelwa leli gumbi zenza ukuba libe yinxalenye ebalulekileyo yekhaya efuna ukuhoywa ngokwemiqathango yocwangciso kunye noyilo.
Ukongeza ukusebenza ekhitshini lakho, ukongezwa kwebar kwasekuseni sisisombululo esifanelekileyo. Kukugqibela kokubandakanywa kwimisebenzi emininzi kulo naliphi na ikhaya.
Yintoni iSiqithi sakusasa saseBar
Iingcamango zeBar Breakfast Breakfast
Isidlo sakusasa seBar Countertop Iingcamango
Isidlo sakusasa ngeSink
Ibha yesidlo sakusasa isisiqithi esipheleleyo sekhitshi okanye indawo ekuthiwa yitafile ingaphezulu enobude obenendawo eyaneleyo yemilenze kunye nobukhulu obunokulungiselela indawo eyaneleyo yokutya.
Ikhawuntari yesiqhelo yesidlo sakusasa inokuphakama okuqhelekileyo kweesentimitha ezingama-42 (iisentimitha ezili-107) kunye nobunzulu / imiphezulu yeetafile engaphezulu kweesentimitha ezili-12 ukuya kwezili-16 (iisentimitha ezingama-30 ukuya kwezingama-40). Indawo yokuhlala yomntu ngamnye ihlala ikwi-intshi ezingama-24 ukuya kwezingama-30 (iisentimitha ezingama-60 ukuya kuma-70).
Ubude bebonke bekhawuntari yakho yasekhitshini buya kumisela inani lezihlalo onokuzigcina kwisithuba. Umzekelo, ukuba ikhawuntari yakho yasekhitshini ine-intshi ezingama-120 ubude, oko kuthetha ukuba inokuhlala izitulo zebar ezine (i-intshi ezingama-120 zahlulwe nge-intshi ezingama-30) Jonga imizekelo Iziqithi zasekhitshini zesiko Apha.
Le khitshi yaseTuscan yase-Italiya iphefumlelweyo inemixube ye-rustic yokwakheka kwendalo. Iqukethe isiqithi sase-bar esiphakamileyo kunye ne-marble countertop. Isitulo esenziwe ngesinyithi esenziwe ngesinyithi, imigangatho yelitye yendalo, iglasi enefestile yefestile kunye nezibane ezihonjisiweyo zibonisa ugxininiso olukhulu kuyilo lwasekhitshini lwesiTuscan. Ezinye izinto zokuma zibandakanya isilingi somthi weplanga eneebhondi eziveziweyo, ithoni ekhanyayo enamakhabethe eqinile enkuni, ukugqiba kwe-matte i-backsplash ye-ceramic kunye noyilo olwenziwe ngokwesiko.
Zithini izibonelelo zebha yesidlo sakusasa yasekhitshini?
Zininzi izibonelelo zokuba nesitya sakusasa ekhitshini lakho. Enye yazo kukuba ibonelela ngendawo yokutyela apho ungabamba khona isidlo esikhawulezayo okanye ukonwabele isidlo sangokuhlwa esisesikweni. Ludibaniso olulunge ngakumbi kubanini bamakhaya abaphila ubomi obuxakekileyo nanjengoko ludinga ixesha elincinci lomsebenzi wokuhamba-hamba ngaphakathi ekhaya - lungisa ukutya kwakho ekhitshini kwaye uhlale esitulweni ukukutya kwakule ndawo inye. Ikwasebenza njengendawo yokuhlala eyongezelelweyo ukonwabisa iindwendwe.
Kuba ikhitshi ngokwendalo yindawo apho abantu badibana khona, ibha yesidlo sakusasa ikwayindawo efanelekileyo yokwenza umsebenzi wasekhaya nabantwana, uyonwabele incoko, funda incwadi okanye wenze umsebenzi kwiLaptop yakho. Isebenza ngenjongo enkulu, nokuba yeyomntu okanye umsebenzi wosapho.
Ngamanye amaxesha, ibha yesidlo sakusasa ikwasebenza njengendawo yokubeka ukutya eyongezelelweyo yokulungiselela ukutya. Ukuba isithuba siyavuma, sinikwe isinki okanye indawo yokupheka. Ngokufana nokusetyenziswa kwesiqithi sekhitshi, inokusetyenziselwa imisebenzi ekhethekileyo njengokubhaka.
Ngaphandle komsebenzi owenzayo, inokuba negalelo kwixabiso lobuhle lekhaya lakho njengoko linokuyilwa ngeendlela ezininzi lisebenzisa uluhlu olubanzi lwezixhobo. Xa unikwe isitulo esimnandi sebar, le ndawo inokusebenza njengeyona ndawo kugxilwe kuyo ekhitshini lakho.
Iindidi zeeKhitshi zasekuseni neeBhari
Ibha yesidlo sakusasa yasekhitshini isenokuba kukugqithisa ukusuka kwikhawuntara esele ikho okanye kwisiqithi esecaleni esahlukileyo. Kwindawo emiselweyo ngokwesiqhelo, isiqithi esisembindini lolona khetho luthandwayo kwisitya sakusasa sasekhitshini. Ukuba indawo yokubala inkulu, inokuthi yenzelwe indawo yokutya epheleleyo okanye yahlulwe njengendawo yokulungiselela isinki okanye indawo yokupheka. Kwiikhitshi ezincinci, indawo elungileyo yokugcina ubuchule kwindawo yokutya kwasekuseni ukuba usebenzisa isongelo phantsi kwetafile ebekwe eludongeni. Oku kunceda kakhulu ekwandiseni ikhaya elincinci njengoko kungekho mfuneko yokwabela indawo yokutya eyahlukileyo. Indawo yokuma simahla yokutya isidlo sakusasa ikwasisisombululo esinexabiso kwezinye iindlela zekhitshi.
Ngokwenyani akukho mda malunga nokuba ibha yesidlo sakusasa kufuneka ijongeke njani. Gcina nje ukhumbula ukuba xa uyila, jonga isitayile sendlela ekhitshini lakho. Uhlobo lokuhlala luyinxalenye ebalulekileyo yebha yesidlo sakusasa. Khetha izitulo ezifanelekileyo. Izitulo zebar ziza ngombala ohlukileyo, ubukhulu, ifom, isitayile kunye nezinto eziphathekayo, khetha enye engasebenziyo kuphela kodwa ikwadibana nenkangeleko ojolise ukuyiphumeza.
Umzekelo, ukuba ufuna ukuba izitulo zakho zincedise ikhitshi lakho eliphefumlelweyo, khetha enye esebenze imilenze yentsimbi kunye nesitulo esixhonyiweyo esinelaphu eliyipateni kwiitoni ezishushu zomhlaba. Ukuba ufuna ukufezekisa ukubonakala kweklasikhi ngakumbi, izitulo ezinelaphu elitofotofo kunye nemilenze yokhuni ziya kusebenza ngokugqibeleleyo. Ngelixa ujonga i-vibe yala maxesha, khetha izitulo zebar ezinesiphelo esiphakamileyo sokukhanya kunye nemilenze yentsimbi.
Leli khitshi elihle lenzelwe ukusebenzisa ikhabhinethi emhlophe ephakanyisiweyo kunye ne-white wave granite countertop, ngaphantsi kwe-mount sink kunye ne-backsplash yanamhlanje kunye nezixhobo zensimbi ezingenasici. Ibha yesidlo sakusasa eyoyikekayo ilungele ukonwabisa iindwendwe okanye abantwana ukuba benze umsebenzi wesikolo ngelixa uMama elungiselela ukutya okuphekwayo ekhaya. Inendawo evulekileyo ngaphantsi kwegumbi lomlenze kunye nendawo yokugcina eyongezelelweyo. Izibane zamatye ezihonjisiweyo zale mihla kunye nezibane ezingaphantsi kwekhabhinethi zinokunceda ekwenzeni ukutya kube lula kakhulu.
Umxube wekhabhathi yeplanga ethe tyaba kwaye iphakanyisiwe kumthunzi okhanyayo, kumgangatho welitye lekalika, kwi-countertop yemarble ekhazimlisiweyo kunye nakwisiqithi sakusasa sokutyela ibhari kunika uphawu oluqhelekileyo lwekhitshi ephucukileyo. Ikhandlela elikhanyayo lekhandlela elimhlophe libopha isitayile esipheleleyo sokuhombisa.
Nangona ubungakanani beli khitshi libanzi, ikhawuntari yesitayile yegalali isebenza ngokufanelekileyo ukubonelela ngendledlana yesisa ekhokelela emnyango omkhulu wokungena. Iingcango zekhabhathi ezimhlophe zangaphakathi ezimhlophe ezibhangiswe ngeglasi ngaphambili eludongeni iikhabhathi ezixhonyiweyo zivula ngakumbi. I-Carrara marble ephezulu kwisiqithi sokutya kunye neekhabhathi zombala oluhlaza okwesibhakabhaka zokugcina ngakumbi kwaye inika indawo ekugxilwe kuyo. Umgangatho we-oki ongwevu oya kuthi gingci phambi kwendlu, izixhobo zentsimbi ezingenasici kunye nokubuyela umva kwetayile kwitye eyongeza umnxeba wangoku konke kunye.
Ukubumba isithsaba esingapheliyo, ithoni emnyama yeplanga enekhabhathi ephakanyisiweyo yindawo ephambili yekhitshi yaseTuscan. I-countertop ye-Marble, i-backsplash yamatye endalo, iiplanga eziqinileyo zokubeka iiplanga, i-flooring ye-wood kunye ne-pendant yokuxhoma ukukhanya kufudumeza le khitshi yaseTuscan. Indawo eyahlukileyo yokudla isidlo sakusasa yokuphakama ivumela umbuki zindwendwe kunye nokuzonwabisa xa elungiselela ukutya.
Ikhabhinethi emhlophe yesitayile esimhlophe esine-marble countertop iseyilo loyilo lwekhitshi. Izixhobo zensimbi ezingenasici, izixhobo, ukukhanya kwemizi-mveliso kunye nokubuyela umva kwesinyithi kubonelela ngokujija kwanamhlanje. Itafile ephakanyisiweyo yokuphakamisa ibha yesidlo sakusasa iyasebenza kakhulu, yomelele kwaye ayinamabala. Ityhubhu yethusi yetyilethi yesilayidi ibonisa umgangatho wemibala etyebileyo, ipateni kunye nemvakalo.
Ukudlala ujikeleze ngemibala kuyonwabisa. Iikhabhathi zasekhitshini ezinemibala Uyilo lwesitayile esi-shaker kunye neefreyimu zeefestile ezifanayo kunye nemiqadi yesilingi iyayandisa le ndawo yekhitshi. Umbala ombala opeyintiweyo onombala ohlaza okwesibhakabhaka unika ukuphakama okungaphezulu kunye nokulingana okufanelekileyo kwendawo yokutya kwasekuseni ephakanyisiweyo, izitulo eziphakamileyo kunye nezibane zependant ze-chic. Izibane ezikhanyisiweyo ezihlaziyiweyo kunye noludonga lwedonga zibonelela ngezibane ezaneleyo zokulungiselela ukutya. Itafile ye-quartz ebunjiweyo eluhlaza okwesibhakabhaka isebenza kakuhle kakhulu kumabala abo, ukuqala, kunye nokumelana nobushushu ukubala ezimbalwa. I-Sleek eyenziwe ngokwezifiso zeepatheni zeceramic kulula kakhulu ukuyicoca.
Umhle ngobuhle, lo mthi weethoni omnyama uvale isilingi udibana kakuhle nobushushu kunye nomtsalane womthi oqinileyo. Iikhabhathi ezimhlophe ezifakwe ngaphakathi ezimhlophe ezinekhawuntara emhlophe yemarble zinika eli khitshi iphalethi enencasa kunye neyala maxesha. Ithoni emnyama yesiqithi esiqingqiweyo somthi kunye nesinki kunye nezibane ezihonjiswe ngaphezulu zinika indawo ethe kratya yokutya, ukulungiswa kokutya kunye nokongeza umahluko kwisikim esimhlophe esimhlophe.
unxiba njani emtshatweni
Eli khitshi lesikimu esimhlophe esine-white Corian solid countertop linika eli khitshi isitayile esimnandi sanamhlanje. Ikhabhathi yoyilo lwe-Shaker yeklasikhi kunye noyilo lwesiko lekhabhathi ezixhoma iikhabhathi ezonyukela phezulu kwisilingi ineglasi ngaphambili yokukhanya kunye nokuziva kuvulekile. Ibha yesidlo sakusasa ibonelela ngendawo yeziko lokusela ukuba libekwe ngokucocekileyo longeze uphawu ngakumbi kwikhabhinethi yesiqithi. Izixhobo zensimbi ezingenasici, izitulo eziphakamileyo kunye nezibane ezikhanyisiweyo eziqaqambileyo zonyusa isitayile sangoku.
Uyilo lwekhitshi lwaselwandle lweMeditera lubandakanya ucango lwentsimbi olwenziwe ngobunkunkqele, ithoni emnyama yekhabhathi yokhuni lwekhabhathi kunye neplanite yethambeka kunye nomfanekiso wethayile kaMoses obonisa umtsalane wale ngingqi. Imibala ethambileyo yesilingi eluphahleni, iindonga kunye nemigangatho zibonelela ngokwahluka okumangalisayo. Ikhawuntara egobileyo yebha yesiqithi, imilenze yentsimbi ejikelezayo kunye nekhaphethi yemveli ebonisa ifuthe leMeditera.
Itafile yentsimbi engenasici engenanto yokubuya umva kwendonga, udonga olufakelwe udonga lwetshimini, izixhobo zombane ezi-sleek kunye namanqanaba eetafile aphakamisa into ebengezelayo kunye nembonakalo yemizi-mveliso yale khitshi yanamhlanje. Imithi emnyama yethoni ebonakalisa iishelfu zekhabhathi kunye nomgangatho wesiko ukuya kwiikhabhathi zesilingi ezihlangana ngokungagungqiyo kunye nekhabhathi yesiseko seplanga yesiqithi sakusasa kunye nomgangatho weplastikhi womthi weplasta.
Ikhitshi yangoku enesitayile se-eclectic, ibonisa udonga lwezitena olugqithisileyo kunye nokudlula kwiishelufa zokubonisa kwaye ivumela unxibelelwano nezinye iindawo zendlu. I-countertop emhlophe yemarble, udonga lohlobo lwe-chimney oluxhonywe phezulu, izixhobo zensimbi ezingenasici, i-backsplash yensimbi yensimbi, isitulo sebar ye-industrial, i-flat-panel cabinetry kunye ne-Zebrano veneer finish, i-pendant light kunye ne-porcelain floor yongeza iskimu sanamhlanje kuyilo. Le khawuntari yesiqithi isebenza kakhulu kwaye ibonelela ngendawo yokugcina eyongeziweyo.
Eli khitshi langoku libonisa umgangatho weplanethi ethe tyaba ukuya kwisilingi ephezulu ekhabhathini emnyama. Kukho umthombo olungileyo wokukhanyisa ngokubanzi ukusuka eluphahleni naphantsi kwezibane zekhabhinethi. I-marble backspalsh ephothiweyo kunye ne-countertop yongeza ukuthungwa. Itafile yeglasi edadayo yanamhlanje ngaphezulu kwesiqithi sakusasa sogcina indawo.
Esi siqithi sinexesha elide lesidlo sakusasa yindawo efanelekileyo yokubonisa iresiphi entsha. I-oak laminate flooring kunye ne-matchstick tile backsplash inika ubume kunye nokwahlula kwi-quartz emhlophe yokuphamba kunye neplanethi-yeplanethi yeethoni emnyama yeethoni yekhabhathi kule khitshi yanamhlanje.
Isiko lesidlo sakusasa eliphakanyisiweyo elenziwe ngesitayile segranite esityebileyo longeza ukujija kwikhabhathi zekhitshi zentsimbi kunye nezinto zombane. Imigangatho emininzi yemigqomo yee-stool ibonelela ngokungafaniyo okucacileyo kunye nobomi kumgangatho omhlophe we-ceramic tile.
Le khitshi yanamhlanje ibonelela ngeendawo ezimbini zokutyela, ukusuka kwi-peninsula ye-bar ephakanyisiweyo okanye kwisiqithi esiphakathi. Uyilo lubonisa isilingi esiphakamileyo esigxunyekwe ngemiqadi yeplanga eqinileyo edibanisa kakuhle nomgangatho wokhuni oluqinileyo. Umfula omhlophe we-granite countertop kunye nekhabhinethi emhlophe kunye ne-white ceramic tile backsplash inika le khitshi i-classic ambiance. I-Crystal chandelier yongeza ubuhle kwisithuba.
Ikhitshi ye-U emile okwangoku eneekhabhathi ezimhlophe zeShaker ezimhlophe, imibala emininzi yematshisi yomlinganiso, izixhobo zensimbi ezingenasici kunye nesitripthi esimnyama esimenyezelisiweyo esinikezela ngesiphelo. Ibha yesidlo sakusasa ephakanyisiweyo isebenzise i-countertop ehlaziyiweyo yokwenza ubume obongeziweyo.
Eli khitshi lesitayile sotshintsho lisebenzisa umbala wekhrimu ongathathi hlangothi kwiikhabhathi zepaneli ezithe tyaba, iphakamise isiqithi sebhari sakusasa kunye nobusi obunemibala yobunjineli obomeleleyo. Itafile yegranite emnyama emnyama, izixhobo zombane ezingenazintsimbi, izitulo zokutyela kunye nezitulo zebar ezinemigca elula, izibane zependant zakudala kunye nezinto ezincinci zinika ukuziva okulingeneyo ukuze ulingane nendlela yokuphila yale mihla.
Ikhitshi enesitayile yanamhlanje enemilo yesiko iBianco Romano granite isidlo sakusasa sentsimi ilungele ukonwabisa iindwendwe ngokungaqhelekanga. Ikhabhathi yekhitshi yangoku kunye nezixhobo zentsimbi ezingenasici zenza uncoma ngokugqibeleleyo umxholo woyilo.
Isicwangciso sekhitshi esivulekileyo sibonisa imimandla eyahlukeneyo yomsebenzi ukuze wandise ukusebenza kakuhle kule ndawo iphangaleleyo. Indawo nganye yokusebenza inezinto zombane kunye nezinto ezenzelweyo ngokusetyenziswa kwazo njengokulungiselela, ukupheka, ukubhaka, ukuphaka, ukutya, ukucoca kunye nendawo yekofu. Ikhawuntara yebha yesidlo sakusasa isetelwe ecaleni kwegumbi ukonwabisa ngakumbi kunye nokunceda iindwendwe.
Ukucoceka kwaye kulula Isiqithi sasekhitshini esinendawo yokuhlala isitulo kunye ne-butcher block ibar breakfast Island. Ibha yebhlokhi ephakanyisiweyo ilungele ukutya kwindawo yokutyela okanye kwabo banqwenela ukunceda ekulungiseleleni ukutya. Intsalela yesi siqithi ine-countertop ye-beige granite kunye ne-oven eyakhelwe ngaphakathi, isitofu kunye neendawo ezininzi zokuxuba izithako, ukubhaka kunye nezinye iintlobo zokulungiselela ukutya.
Ikhabhinethi yesitayela seShaker yeklasikhi ipeyintwe ngemibala emibini yemibala-emhlophe ngokwesiko kunye nengcinezelo engwevu yesiqithi se-bar. Umgangatho ofudumeleyo ophakathi womthi okhuni, izibane zesikhanyiso sangoku kunye nodonga lombala we-beige unika ilizwe laseFrance ukuba lizive liyilo. Izixhobo ezingenazingcingo, isitulo esinebha yentsimbi, kunye nesofa eyonyuswe ngokupheleleyo yindawo ehleliyo inika ukulingana phakathi kwelizwe kunye nenkqubo yanamhlanje.
Isitayile saseYurophu esineplaneli yekhabinethi egqityiweyo yokugqitywa kweenkuni inembonakalo ecekeceke. Ibha yesidlo sakusasa esikhuliswe ngegranite idityaniswe nesitripthi esenziwe ngentsimbi engenasiseko kunye nesinki yesitya esiphindwe kabini. Izixhobo zensimbi ezingenasici, i-laminate flooring, i-countertop ye-granite ene-backsplash ephantsi kunye neendonga ezimhlophe ezimhlophe ezibonakalayo zibonisa isitayela esincinci esincinci kunye nokusebenza okukhulu.
Le khitshi iphefumlelweyo yaseTuscan yenzelwe ukubumba isithsaba, i-inset eyenziweyo ikhabethe elimhlophe elidityaniswe nesiqithi esimnyama esisijikelezo sesiqithi esine-marble countertop. I-backsplash yelitye lendalo, uluhlu lobhedu, iminyango yeengqameko, i-beige peyinti iindonga, iitoni eziphakathi zomgangatho onzima, ikhandlela lesinyithi sokukhanyisa ikhandlela kunye nezitulo zokutyela ezimnyama ezilukhuni zidibanisa zonke izinto zekhitshi lesimbo saseTuscan.
faka udonga niche
Kuyilo lobunewunewu usingasiqithi wasekhitshini Yahlula ikhitshi kwisiqithi sakusasa sokwenza indawo eyongezelelweyo yokulungiselela ukutya. Itafile yegranite ekhazimlisiweyo, isitayile sekhabhathi seShaker ekugqibeni kweenkuni ezimnyama, ukutyibilika komgangatho, ifestile yeglasi ebanzi, ukukhanya kwezibane kunye nezixhobo zentsimbi ezingenanto zenza le khitshi ibe yala maxesha.
Le khitshi yala maxesha inezinto ezibomvu eziphezulu zokugqiba iikhabhathi ezinezixhobo zentsimbi ezingenasici kunye noxinzelelo oluphezulu laminate. Indawo yokutyela ekhuliswe kwindawo yokutyela ifihla iwayini kunye neziselo ezipholileyo kwaye isebenza njengesahluli segumbi esahlula indawo ephambili yekhitshi kwindawo yokutya; ukudala indawo yokuhlala efanelekileyo yokonwabisa iindwendwe.
Uyilo lweli khitshi lwangoku lubonisa isiqithi sebhari sakusasa esinyusiweyo esinendawo ekuthiwa yi-glass countertop, i-laminated flooring, i-chrome finish stools, izixhobo zentsimbi ezingenasici, i-white flat-panel panel ye-thermofoil cabinetry kunye nezibane ezimnyama ezihonjiswe ngombala. Ipeyinti yeglasi epeyintiweyo yindawo ephambili ekujoliswe kuyo kule khitshi ephathekayo.
Iziqithi zasekhitshini ezinemivalo yesidlo sakusasa ziza ngeendlela ezininzi, ubukhulu, ubeko, kunye nezitayile. Le khitshi yokutyela yanamhlanje inikezela uyilo olwahlukileyo olunamagumbi emilenze eyaneleyo yeendwendwe. Ekhitshini kukho iikhabhathi zeplanethi ezimhlophe ezinamacala amhlophe, kunye nokuhombisa okulula kunye nokuhombisa udonga oluvulekileyo oluvulekileyo iikhabhathi ezixhonyiweyo kunye necomputer yentsimbi engenasici. Izixhobo, i-ceramic tile backsplash, kunye neetoni ezimbini ze-fauxwood flooring zibonisa umdla omkhulu kunye nokubukeka kolu luyilo lwangoku lwekhitshi.
Le khitshi yendabuko ekhazimlayo inomgangatho ophakathi ukuya kwiitoni eziphakanyisiweyo-zepaneli ezihlangeneyo kunye negolide ye-almond egudileyo. Inkqubo ye- Isiqithi esikhulu sekhitshi esinendawo yokuhlala ine-sink esezantsi kwentaba kunye nendawo yokuphelisa ibha yesidlo sakusasa. Cove isilingi ngezibane ezigqityiweyo kunye nezibane eziqaqambileyo zongeza umdlalo wedrama kunye nobushushu kweli khitshi. Amatye endalo adala ubucwebe obuchukumisayo.
Ikhabhathi emnyama yeMeditera iphefumlele ikhitshi yendabuko. Imibala esemhlabeni yomgangatho we-porcelain, i-mosaic tile backsplash, i-countertop ye-granite ephakanyisiweyo, iphaneli ephakanyisiweyo enzima, ikhabethe yomthi omnyama kunye ne-diamond eqingqiweyo yoyilo kunye nesithsaba sokubumba, esolulela kuyilo lwe-hood yoluhlu inika indawo indawo efudumeleyo. Isiqithi esinendawo yokuntywila kumgxobhozo wentaba sibonelela ngendawo yokusebenza ebanzi yokulungiselela ukutya. Ibha yesidlo sakusasa enomthi oqinileyo kunye noyilo lwakudala igcina ubuhle beLizwe eliDala.
iindlela ezizodwa zokubuza iintombi
Ikhitshi lesiko elinamakhabhathi amhlophe aphakanyisiweyo amhlophe kunye nokubumba kwesithsaba kudibanisa kakuhle kunye ne-Aspen emhlophe yegranite countertop kunye ne-travertine backsplash edityaniswe neetayile zodonga ezimhlophe zangaphantsi. Isiqithi sebhari yesidlo sakusasa esinekhathalogu emhlophe ephakanyiswe yiphaneli yekhabhinethi kunye nenkxaso ye-baluster yongeza ukusebenza kweli khitshi. Iithowuni ezimbini zepateni eyenziwe ngomthi, ikhandlela yokukhanyisa ikhandlela kunye nezixhobo zentsimbi ezingenasici zibonelela ngesandi kunye nokulinganisa isikimu sombala.
Ikhitshi emile okwe-U enee khabhathi ezimhlophe ezifakwe emhlophe ezifikelela esilingini zidityaniswe neglasi ngaphambili ime ngokuchasene nomgangatho omnyama weplanga kunye nophiko lweplanite emnyama. Izixhobo zanamhlanje zentsimbi engenasici, umgubo wesilivere owenziwe ngesitulo sasekhitshini, umbala ongathathi hlangothi we-backspalsh uyasincoma isikimu. Ikhawuntari enkulu yesiqithi ibonelela ngendawo entle ekugxilwe kuyo.
Uyilo oluhle lweMeditera oluphefumlelweyo lwasekhitshini lubonelela ngendawo eninzi yokutyela ukusuka peninsula yayo enkulu enamacala amabini okusasa. Inkulu ngokwaneleyo ukuba inokwanela abantu abathandathu ngokukhululekileyo ibha yesidlo sakusasa inekhabhathi yomthi ekhanyayo kunye necwecwe lokubala legranite elimdaka. Isiqithi esisembindini sibonelela ngonxantathu osebenza ekhitshini owahlukileyo kwindawo yokutya.
Uphawu loyilo loyilo lweMeditera- izithsaba zobumbeko zibandakanyiwe njengenkxaso yokuphakanyiswa kwebar yesiqithi sakusasa kunye nenkxaso yamatye endalo. Ukuqina kwethoni emnyama yeethoni yokugqiba iphaneli yokuhombisa ekhitshini yekhabhinethi isebenzisa ukubumba isithsaba njenge cornice.
Oku Uyilo lwekhitshi yesiqithi kabini unendawo yesibini yesiqithi enombala omdaka ngombala omnyama kunye nesithsaba esincinci esisekela i-jet emnyama egudileyo. I-backsplash ye-mosaic tile kunye ne-countertop ye-granite kwi-beach-like sandy tan color ibonisa indawo yolwandle yaseMeditera. Umgangatho ophakathi wokhuni olomeleleyo wongeza ubushushu kwigumbi.
Uyilo oluqinisekileyo nolwamkelayo lwengcamango evulekileyo lulungele ukonwabisa usapho kunye nabahlobo. Ikhitshi lendlu eliphefumlelweyo eliphefumlelweyo elinekrisimesi kunye neebhedi zekhabhathi yesiqithi sakusasa ibonelela ngendawo eninzi yokulungiselela ukutya kunye nokutya. Iikhabhathi zepaneli ezifakwe ngaphakathi ezimhlophe ezinabela eluphahleni zinika eli khitshi imvakalelo eqaqambileyo necocekileyo. Ikhabhinethi yokubonisa ekugqityweni kombala we-tan embindini ngeglasi ngaphambili ibonelela ngokufudumeleyo kunye nokulingana kuyilo kunye nenkqubo yombala. Ukuphola kolwandle okuluhlaza okupholileyo kunye ne-mosaic tile tile backsplash, izibane zeglasi kunye nezibane zesilivere zalahla zezibane zenza eli khitshi libukeke liphezulu kakhulu.
Ikhitshi lesiNtu eliphefumlelweyo ngesitayile sotshintsho esivumela ukuhamba ngokulula phakathi kwekhitshi kunye negumbi lokuhlala. Isiqithi sokutya esine-countertop yemarble ephothiweyo yenzelwe indawo esebenzayo ngakumbi-ukulungiselela ukutya, indawo yokugcina eyongezelelweyo kunye nendawo yokuhlala ye-pub kunye nendawo yokutyela. I-Porcelain flooring kunye ne-backsplash yezitena ezibengezelayo inezinto ezibonakalayo. Izibane zeglasi ezihonjisiweyo, i-rustic sink faucet, izixhobo zensimbi ezingenasici zinika umnxeba wokuhombisa.
Ukuboniswa ngasentla kuyisiko L-ubume bekhitshi ngobuhle behlabathi elidala kunye nobuhle bekhitshi eliphefumlelweyo leMeditera. Isithuba sibonisa umxholo weMeditera ngokusetyenziswa kweekhabhathi zepaneli eziphakanyisiweyo ezimnyama. Isanti enemibala ye-porcelain enemigangatho exutywe ne-backsplash yelitye yendalo emhlophe iyancoma imvakalelo eqaqambileyo neyamkelekileyo.
I-countertop ye-granite ephosiweyo, ukubukeka okubonakalayo kwezixhobo zensimbi ezingenasici kunye nombala omhlophe we-antique wesikhumba sezihlalo zokutya unika le khitshi yesitayela saseMeditera imvakalelo elula. Isiqithi esikhulu sokutyela esinekhabhinethi emhlophe esekwe emhlophe kunye nesandi esenziwe ngentsimbi esidibanisa zonke izinto zoyilo.
ungathi tu ngonaphakade
Uneminyaka emingaphi umfazi ka-donald trumps
Unxiba ntoni umbala kamyeni womyeni
Iipaneli zangoku zokuhlambela